Keen qalab aad adigu leedahay > Vielhuber David
Keen qalab aad adigu leedahay07
Si dhib yar iskama indho tiri karto haddii aad rabto inaad si dabacsan oo madaxbannaan u shaqeyso: daruurta. Waxaa laga yaabaa inay jiraan tiro dad ah oo horeba u isticmaalaya daruurta iyaga oo aan ogaanin. La socoshada, tusaale ahaan, dhammaan waxyaabaha ku jira waxaa lagu keydiyaa daruurta waana la heli karaa markii loo baahdo. Netflix waa tusaale halkan ku soo kordhaya Jarmalka. Ama iswaafajinta kumbuyuutarrada kumbuyuutarka ama laptops oo leh dhammaan qalabka moobiilka ayaa sidoo kale inta badan lagu sameeyaa daruurta.
Xisaabinta daruuraha ayaa si tartiib tartiib ah u sii socota dhulka
Noloshooda gaarka ah, dad badan ayaa horeyba ugu raaxaysanaya faa'iidooyinka iyo xorriyadda daruuraha. La shaqaynta daruuraha ayaa si tartiib tartiib ah laakiin hubaal ah in ay sidoo kale kasbanayso shirkadaha da'da yar. Bixiyeyaal badan ayaa la qabsada shuruudaha cusub ee suuqa waxayna horumariyaan fikrado la qabsanaya baahida macaamiisha. Taasi Dell BYOD Mabda'a waa, tusaale ahaan, hab wanaagsan oo ku saabsan sida loola shaqeeyo si macno leh daruuraha. BYOD waxay u taagan tahay keen qalab adiga kuu gaar ah, sidaas darteed waa ku dhawaad ​​is-sharaxaadda, shaqaaluhu waxay isticmaalaan moobilkooda gaarka ah si ay u helaan xogta shirkadda ee ku kaydsan meel kasta iyagoo isticmaalaya daruuraha. Beryahan dambe waxa aynu u barannay in aynu isticmaalno tablet-keena ama casriga ah si aynu u galno internet-ka oo aynu u eegno iimaylkayaga inta aynu socdaalka ku jirno. Iyo qaar badan oo sidoo kale hubiya iimaylada ganacsiga ee ka baxsan saacadaha shaqada iyo, iyadoo ku xiran degdegga, isla markiiba uga jawaab. Mabda'a BYOD hadda wuxuu ku fidiyaa dhammaan waxyaabaha oo dhan meelaha kale. Markaa ma hubin kartid e-maillada ganacsiga oo keliya, laakiin sidoo kale ma aad geli kartid dhammaan faylasha iyo macluumaadka la xidhiidha shaqada, meel kasta oo aad joogto.
Dabacsanaanta ba'an ee daruuraha
Markaa shaqaaluhu aad bay ugu dabacsan yihiin goobta shaqada iyo saacadaha shaqada. Waxaana horeba u jiray daraasado caddaynaya in mabda’ani uu si weyn u kordhinayo wax-soo-saarka iyo waxtarka shirkadda. Dad aad u badan ayaa hadda awood u leh inay ka shaqeeyaan guriga. Baabi'inta safarka xanaaqa ee xafiiska waxay badbaadisaa waqti badan iyo neerfayaasha sidaas darteed waxay abuurtaa xoog iyo tamar cusub oo aad ku maalgashan karto shaqadaada beddelkeeda. Dhammaan faa'iidooyinka, waa in sidoo kale laga fekeraa badbaadada. Xogta shirkadda oo qayb ahaan si adag u qarsoon ayaa hadda meel internet ka ah sidaas darteed guud ahaan waa la heli karaa qof kasta oo internet leh. Dabcan waxaa jira habab iyo habab lagu ilaalinayo xogtaada, taas oo dabcan ah inay tahay mas'uuliyadda bixiyaha. Halkan waxa aad isku ilaalin kartaa magacyada isticmaalaha, ereyada sirta ah iyo dab-damiska. Marka laga hadlayo adeegyada daruuriga ah, xogta ayaa inta badan lagu daray a Xaqiijinta arrimo badan la hubsaday. Haddii aad ku kalsoon tahay oo aad ku tiirsan tahay bixiyaha adeegga, waa inaad aqbashaa faa'iidooyinka badan ee xisaabinta daruuraha oo aad barataa sidaad uga faa'iidaysan lahayd. Shaqaaluhuna waxay si mahadnaq ah u aqbali doonaan xorriyaddooda cusub iyo dabacsanaantooda cusub waxayna dib u bixinayaan kalsoonida lagu aaminay iyaga oo wata shaqo wanaagsan oo ay ka soo dhalaali doonaan sidii hore. Intaa waxaa dheer, qiimaha aadka u hooseeya ee iibsashada iyo dayactirka marka la barbardhigo nidaamka server-ka ee goonida ah ayaa ka hadlaya daruuraha.